Banyere Anyị - Ningbo Scojet Import & Export Co., Ltd
Scojet bụ ngwaahịa imewe, nkenke machining na mba na n'ichepụta ụlọ ọrụ na-eweta anụ ụlọ na zuru ụwa ọnụ n'ichepụta ihe ngwọta na oru buu igba n'ulo site nnukwu OEM Nsukka.
Scojet, Inc. meghere ibo ụzọ ya na 2001 dị ka a ngwaahịa imewe azụmahịa, na 2004, anyị malitere anyị mba sourcing arụmọrụ, 2008 anyị zụrụ anyị mbụ CNC igwe na malitere anyị US machining arụmọrụ, 2011 anyị malitere anyị aerospace machining arụmọrụ ke US na natara anyị AS9100 / ISO9001 certifications, 2015 anyị meghere Ningbo Scojet Import Export Company na Ninghai China aka suppliers na àgwà mma, engineering nkwado na-eme ka anyị ọkọnọ yinye kpu oru oma.
Anyị na-e-enyere ụlọ ọrụ na-eweta ha na ngwaahịa na ahịa n'ihi na ihe karịrị 16 afọ. Scojet averages n'elu 60 oru a afọ si echiche mmepụta na ubi ndị dị otú ahụ dị ka aerospace, akpakanamde, ahịhịa na ubi, n'ji ngwaahịa na ọgwụ ọrụ.
Scojet bụ a ukwuu oru, ike ike ibu azụmahịa na a akụkọ ihe mere eme nke ọma imewe na n'ichepụta oru n'okpuru anyị eriri.
Anyị China dabeere trading ụlọ ọrụ na ndị mmekọ-ekwe ka anyị mee ka uwa n'ichepụta ụlọ ọrụ na-achọ ka mpi na mba ahịa anyị adị ugbu a. Ọtụtụ n'ime anyị mmekọ na-ISO9001 gbaara, na ha nile nwere ebe anyị nzere usoro.
CNC Gbanwere na igwe nke osisi alloys dị ka Rene, Inconel, Waspaloy & Titanium, Swiss machining, Product Design, Plastic / Rubber Nkedo, Metal Nkedo: Aja, Anwụ na Investment, Mechanical Control Gịnị, Light Systems tinyere Halogen na ikanam, zọ na metal Ụgha.
Anyị na-enye dị iche iche iche iche nke ngwaahịa na elu àgwà na mma price. Anyị na-atọ ya ụtọ na-esi gị ase ma anyị ga-aza gị ozugbo o kwere omume. Anyị arapara ụkpụrụ nke "Quality mbụ, ọrụ mbụ, aga n'ihu mma na ọhụrụ izute ahịa" N'ihi na management na "Ọdachi nkwarụ, efu mkpesa" Dị ka àgwà na ebumnobi.